उपयोग बिक्री प्राथमिकता तपाईंको आउटबाउन्ड बिक्री रूपान्तरणहरू डबल गर्दछ Martech Zone
बिक्रीको प्राथमिकता प्रयोगले तपाईंको आउटबाउन्ड बिक्री रूपान्तरणहरूलाई डबल गर्दछ
आइतबार, डिसेम्बर 14, 2014 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म यस साता सास सीईओसँग छलफल गर्दै थिएँ जसले उत्पादक बिक्री प्रतिभा भाँडा लिन संघर्ष गरिरहेका छन्। जब उनीहरू स्कोर गर्दछन् र उनीहरूको इनबाउन्ड लीडहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन्, टोली प्राय: सुराउँदछ र तिनीहरूको कल थ्रूपुटलाई भयानक बनाउँछ। एक दिनको 70०+ कल गर्न एक विशेष प्रकारको बिक्री व्यक्ति लिन्छ, तर वास्तवमै स्टार्टअपले चाहिन्छ कि यदि यसले सफल बृद्धिलाई पर्याप्त बिक्री गर्न आशा गर्दछ।
अनुत्पादक बिक्री टोलीको साथ केहि मुद्दा यो हो कि उनीहरूको प्राथमिकता उनीहरूको प्रक्रियामा एकीकृत हुँदैन र उनीहरूको टोली बहु-कार्यमा छोडिन्छ र आफ्नै प्राथमिकताहरूको मार्फत काम गर्दछ। यसले कम कल, सम्भावित कम टच पोइन्ट, र - अन्तमा - कम बिक्रीमा परिणाम दिन्छ। Velocify फेला परेको छ कि उपयोग प्राथमिकता प्रयोग गर्न सक्छन् दैनिक कुराकानी समय 88 XNUMX% र डबल रूपान्तरणले वृद्धि गर्नुहोस्!
उत्पादकता बढाउने क्षमता केवल हाम्रो छिटो, छिटो बन्द हुने बारे मात्र होइन बिक्री फेला पारेको छ कि ठुलो सments्लग्नताको लागि लगातार टच पोइन्टहरूको साथ लामो बिक्री चक्रको आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाईंको सबै बिक्री टोलीले गरिरहेको छ भने तातो लिडहरू बन्द गर्दैछ, तपाईंको कम्पनी ठूला सments्लग्नताहरूमा हराइरहेको छ जुन कार्य सूची कहिल्यै बनाउँदैन! लिड स्कोरिंग, कल फ्रिक्वेन्सी र प्रतिक्रिया समय सबै स closing्लग्नताहरू बन्दको लागि महत्वपूर्ण छन्।
संख्याहरू मा छिप्न को लागी केहि छैन। स्वचालित प्राथमिकता कम्पनीहरु आफ्नो राजस्व उल्लेखनीय बृद्धि गर्न मद्दतको लागि समय र बार प्रमाणित गर्दै छ। यहाँ Velocify को इन्फोग्राफिक छ कि केहि हावा मा बलहरु को ड्रप गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर देखाउँदछ। तपाईं पूर्ण रिपोर्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, प्राथमिकता को शक्ति.
टैग: नेतृत्व स्कोरिंगबहु-कार्यप्राथमिकताबिक्री नेतृत्व स्कोरिंगबिक्री मल्टीटास्किंगबिक्री प्राथमिकतारनवेग
For-चरण गाइड खोजीको लागि एक अनुकूलित ब्लग सिर्जना गर्न
एक सफल सामाजिक बिक्री रणनीति को जग